Home Wararka (XOG) Heshiiska Qodobada hordhaca ah ee la isku waafaqay Shirka Wadatashiga Doorashada...
(XOG) Heshiiska Qodobada hordhaca ah ee la isku waafaqay Shirka Wadatashiga Doorashada Muqdisho
Maalinta Khamiista ah marka laga reebo ra’isul wasaararaha, madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha Banaadir ay sidoo kale kasoo qeyb galayaa madaxweyneyaashii hore Sheekh Shariif, Xasan Sheekh iyo Farmaajo ayaa lagu wadaa in marka hore war murtiyeed laga akhriyo, kadib khudbado la galo, xubnaha bulshada rayidka ayaa sidoo kale la casuumay.
1. Qodobka ugu adkaa ee Maamulka Guddiyada Doorashada Somaliland ayaa u muuqda in lagu heshiiyay guddoomiyaha Aqalka Sare uu soo magacaabo 7 xubnood halka Mahdi Guuleed uu soo magacaabayo 8 xubnood. Doorashada xildhibaannada kasoo jeeda Somaliland ayaa lagu qaban doonaa Afisyoone, waxaana Amniga sugaya Booliska iyo AMISOM.
2. Arrinta Gedo ayaa guud ahaan la isla qaatay soo jeedintii Guddigii Farsamada ee ku shiray magaalada Baydhaba, kaasoo nuxurkiisu ahaa: In xubnaha Maamul Goboleedyada wafdi dib u heshiisiin u diraan magaalada Garbahaarey, Axmed Madoobe-na uu maamul cusub u magacaabo, iyadoo amniga Doorashada ay sugayaan Booliska AMISOM iyo Booliska magaalada.
3. Waxaa lagu heshiiyay in Doorashada aay ka dhaceyso magaalooyinka Muqdisho, Jowhar, Kismaayo, Baydhabo, Dhuusomareeb & Garoowe. Qodobkaan ayaa inta badan la isku afgartay, balse Beesha Caalamka aay ku adkeysaneyso in la ballaariyo oo laga dhigo laba degaan doorasho iyagoo diiday in dhaqaalaha dheeraadka ah ee loo baahan yahay aay bixiyaan, waxayna Qaramada Midoobay ku doodeysaa in DF aay bixiso lacagtaas.
4. Guddiyada Doorashada ee muranku ka taagnaa ayaa lagu bedelayaa Guddi cusub oo kalsooni ka heysta dhinacyda oo dhan, iyadoo dib loogu noqonayo guddiyada Doorashada ee Maamul Goboleedyada lagana saarayo ciidamada iyo shaqaalaha dowladda.
5. Waxaa jira qodobo ka mida heshiiska la saxiixayo oo cusub, kuwaasoo ay ka mid yihiin Marjica Guddiga xalinta khilaafaadka, Doorasho gelinta dalka iyo inay awoodda Amniga iyo xilka sii heyneyso Xukuumadda Xilgaarsiinta.
6. In xulista ergada ay iska kaashanayaan odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka ah iyo Dowlad Goboleedka.Qoondada Haweenka: In qoondada haweenka ee 30% ah la ilaaliyo.